Nagarik News - एमाओवादीमा पश्चाताप र रुवाबासी
एमाओवादीमा पश्चाताप र रुवाबासी
29 Jun 2013 | 10:28am
काठमाडौं - एकीकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा शुक्रबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको जिम्मेवारी हेरफेर प्रस्तावप्रति अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले असहमति जनाएका छन्। गुटगत प्रक्रियामार्फत नामावली आएको उनीहरूको आरोप छ।
जिम्मेवारी बाँडफाँटसहित पेस गरिएको नामावलीप्रति असहमति सयभन्दा बढी सदस्यले मतदान प्रक्रियामार्फत नेता छान्नुपर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन्। १२ पूर्व लडाकु कमान्डरले सामूहिक राजीनामा दिँदै बैठक बहिस्कार गरे।
तीन मधेसी नेता असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकमा सहभागी नै भएनन्। जारी बैठकमा बोल्ने ३१ मध्ये दीनानाथ शर्मा र लीलबहादुर थापामगरबाहेक सबैले कार्यालयको प्रस्तावमा असहमति जनाए।
कार्यालयले महाधिवेशनले छानेका पदाधिकारी यथावत राख्दै सचिवमा कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी र गिरिराजमणि पोखरेल तथा कोषाध्यक्षमा हिसिला यमीलाई प्रस्ताव गरेको छ।
पूर्व स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचन, लीलामणि पोखरेल र दीनानाथ शर्मालाई बढुवा गरिएको छैन। पोलिटब्युरो सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, नन्दकिशोर पुन, देवेन्द्र पौडेल, लोकेन्द्र बिष्टमगर, गोपाल किराँती, राम कार्की, लेखराज भट्ट, विश्वभक्त दुलाल र नवप्रवेशी रामचन्द्र झालाई स्थायी समिति सदस्यमा प्रस्ताव गरिएको छ।
वैकल्पिक स्थायी समिति सदस्यमा स्वनाम साथी, हितराज पाण्डे, हेमन्तप्रकाश ओली, उर्मिला अर्याल, विश्वनाथ साह, प्रभु साह र श्रवण यादवको नाम परेको छ। पार्टी प्रवेश गर्दा स्थायी समिति पाउने भनिएकी उर्मिला अर्याललाई वैकल्पिक स्थायी समिति सदस्यमा राखिएको छ।
कार्यालयको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै स्थायी समिति सदस्यमा प्रस्तावित जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा मात्र गरेनन्, सयभन्दा बढी सदस्यको हस्ताक्षर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका छन्। 'नेताको चाकरी, चाप्लुसी गर्ने र गुटबन्दीमा नरहेकालाई पाखा लगाउने काम जसरी भयो, त्यसले इमान्दार, त्याग र बलिदानको अवमूल्यन भएको छ। यसरी यो पार्टी चल्दैन' शर्माले भने।
'यो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दछौं। टीका लगाएर होइन, मतदानमार्फत नेता चयन गरियोस् भन्ने जोडदार माग पनि गर्दछौं,' देवेन्द्र पौडेल, लेखराज भट्ट, शक्ति बस्नेत, गोपाल किराँती, झक्कु सुवेदी, हेमन्त प्रकाश ओलीलगायत सय बढी केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ।
'धेरै स्थानमा हामी अपमानित हुँदै आयौं। समायोजनमा अपमान हुँदा पनि हामीले सह्यौं। आज जिम्मेवारी दिँदा जनमुक्ति सेनाको भूमिकालाई अवमूल्यन गरियो,' पूर्व जनमुक्ति सेना कमान्डरका तर्फबाट बोल्दै कालीबहादुर खामले भने, 'हामी १२ पूर्व जनमुक्ति सेनालाई केन्द्रीय कार्यालयको प्रस्ताव स्वीकार्य छैन। हामी सामूहिक राजीनामा घोषणा गर्दछौं।' लडाकु कमान्डरहरू नेतृत्वलाई 'देखाइदिने' धम्की दिँदै बैठक हलबाट बाहिरिएका थिए।
कार्यालयको सो प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै भरत साह, दिलीप साह, अजयकुमार नायकलगायत मधेसी नेताले बैठक बहिस्कार गरेका थिए। मधेसी समुदायलाई केन्द्रीय समितिमा उचित स्थान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले शनिबार बैठक सुरु हुनुअघि बिहान ९ बजे छुट्टै भेला बोलाएका छन्।
वैकल्पिक स्थायी समितिको जिम्मेवारी पाएका श्रवण यादवले जनयुद्धमा लडेकालाई अपमान गरिएकाले प्रस्ताव अस्विकार गरेको बताए। 'जनयुद्धमा लडेका र पार्टीमा रहेकालाई माथि तान्नु त कता हो, कता हिजो आएका चैतेलाई क्रेन लगाएर तान्ने काम गरियो,' यादवले बैठकमा भने, 'यो निकै अपमानपूर्ण कार्य हो।'
पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीले कार्यालयको प्रस्ताव समर्थन गर्न नसकिने घोषणा गरे। 'गुटगत आधारमा ल्याइएको यो प्रस्ताव स्विकार गर्न सकिँदैन। कुन विधि र नियममा टेकेर यो प्रस्ताव ल्याइएको हो? जवाफ चाहियो?' ओलीले बैठकमा भने, 'विधि र नियमभन्दा बाहिर गएर ल्याइएको यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस्।'
वैकल्पिक पोलिटव्युरोको जिम्मेवारी पाएका झक्कुप्रसाद सुवेदीले 'म र तँ' शीर्षक कवितामार्फत् असन्तुष्टि पोखे। 'म भनेको झक्कु हो र तँ भनेको अध्यक्ष हो,' कविताको शीर्षक व्याख्या गर्दै उनले भने – तैंले जे जे भनिस्, मैले त्यो त मान्दै गएँ, तैंले जे–जे भन्दै गइस्, मैले गर्दै गएँ तर आज तैंले मलाई किन निकै पीडा दिइस्। झक्कुले पार्टीमा लागेर सबैभन्दा पीडाबोध भएको दिनका रुपमा शुक्रबारलाई व्याख्या गरे।
अर्का केन्द्रीय सदस्य कृष्ण केसीले एमाले परित्याग गरी माओवादी हुन पुगेकोमा पश्चताप गरे। 'पार्टी परित्याग गरी माओवादीमा आएकोमा पहिलोपटक मलाई यति धेरै पीडाबोध भएको छ,' केसीले भने, 'यस्तो पीडा हुन्छ भने म किन पार्टी परित्याग गरेर माओवादीमा आउँथे र?'
बैठकमा प्रस्तावको पक्षमा बोलेका दिनानाथ शर्माले भने लामो संघर्षपछि आएको प्रस्तावलाई नरोक्न आग्रह गरेका थिए। 'मेरा चेलालाई मभन्दा माथि तानिएको अवस्था छ। म स्थायी समितिमा नै सीमित भएको छु,' शर्माले भावुक हुँदै भने, 'म त ६५ वर्षमा लागेँ। मलाई राजनीति गर्न पार्टीले दिँदैन। लामो संघर्षपछि आएको प्रस्तावलाई समर्थन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।'
सचिव नपाए पार्टी छाड्छु : झा
नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गरेका रामचन्द्र झाले पूर्वसहमति अनुसारको जिम्मेवारी नपाए पार्टी त्याग्ने बताएका छन्। शुक्रबार केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी नभएका झाले पाँचभन्दा बढी पदाधिकारी थप्दा आफूलाई सचिव बनाउने सहमति कार्यान्वयन नभएको बताए।
'पदाधिकारीको झमेलामा म गइनँ। पाँचजना मात्रै पदाधिकारी हुँदा नवौं स्थानको स्थायी समिति सदस्य बन्ने,' उनले भने, 'पाँचभन्दा बढी पदाधिकारी भए सचिवमा लाने सहमति भएको हो।' पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकाले बैठकमा जानुको औचित्य नदेखेको झाले बताए।
सहमति कार्यान्वयन नभए पार्टीमा पनि नजाने उनले बताए। 'सहमति एउटा गर्ने, अहिले भद्रगोल स्थायी समितिमा राखेपछि म जान्नँ,' झाले नागरिकसँग भने, 'सहमतिअनुसार जिम्मेवारी नपाए कुनै जिम्मेवारी लिन्न। कुनै जिम्मेवारीमा नबसे पार्टीमा रहने–नरहने कुरै भएन।'
झा माओवादीमा प्रवेश गरेपछि मधेसमा एमालेलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको निष्कर्ष माओवादीको थियो। एमाले पोलिटब्युरो सदस्य झा पार्टीभित्र 'पहिचानसहितको संघीयता'का पक्षधर थिए। उनी पहिचानको मुद्दामा पार्टीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए।